VPSA Umshini Oxygen generator - China Hangzhou midi Air Ngokwahlukana Izinsiza kusebenza
Isimiso Ukusebenza of VPSA ingcindezi jika adsorption-mpilo generator 1. Izingxenye ezisemqoka emoyeni kukhona nitrogen ne-oxygen. Nitrogen ne-oxygen emoyeni ehlukile adsorption ukusebenza zeolite (ZMS) at lokushisa kuma (i-oksijini kungenziwa bumuncwa nitrogen). Nitrogen ku zeolite yamangqamuzana ngesihlungo adsorption ikhono ungcono mpilo (nitrogen ion futhi yamangqamuzana ngesihlungo ebusweni namandla aqinile), lapho umfutho womoya esimweni nge zeolite yamangqamuzana ngesihlungo adsorbent adsorptio ...
Isimiso Ukusebenza of VPSA ingcindezi jika adsorption-mpilo generator
1. Izingxenye ezisemqoka emoyeni kukhona nitrogen ne-oxygen. Nitrogen ne-oxygen emoyeni ehlukile adsorption ukusebenza zeolite (ZMS) at lokushisa kuma (i-oksijini kungenziwa bumuncwa nitrogen). Nitrogen ku zeolite yamangqamuzana ngesihlungo adsorption ikhono ungcono mpilo (nitrogen ion futhi yamangqamuzana ngesihlungo ebusweni namandla aqinile), lapho umfutho womoya esimweni nge zeolite yamangqamuzana ngesihlungo adsorbent adsorption embhedeni, nitrogen ngu yamangqamuzana ngesihlungo adsorption, umoya-mpilo omncane by adsorption, lokuhlushwa futhi egeleza igesi esigabeni adsorption embhedeni, umoya-mpilo ne-nitrogen ngokuhlukana ngoba i-oksijini. Lapho ngesihlungo yamangqamuzana adsorbs nitrogen ukugcwaliswa, emoyeni imisiwe futhi ukucindezela embhedeni adsorption kuyehla. I-nitrogen amuncwa ngesihlungo yamangqamuzana ihlaziye futhi ngesihlungo yamangqamuzana is kabusha futhi lingasetshenziswa kabusha. I-oksijini zingaba ngokuqhubekayo by ushintsha phakathi imibhede adsorption ezimbili noma ngaphezulu.
I abilayo umoya-mpilo kanye nitrogen iseduze, futhi laba ababili kunzima ukwehlukanisa. Ngakho-ke, ingcindezi jika adsorption elingenawo umoya-ekwenziweni divayisi ingadlala kuphela ukuthola 90-95% mpilo (emakamu polar engakhi umoya-mpilo 95,6%, futhi siyazi ukuthi kwenzekani argon). Kuqhathaniswa cryogenic emoyeni ngokwahlukana unit, sakamuva singabangela likhiqize izinhlobo ezingaphezu kuka 99,5%-mpilo okuhlushwa.
1. embhedeni adsorption yokucindezela jika adsorption emoyeni ngokuhlukana-mpilo isitshalo kufanele iqukathe izinyathelo ezimbili ukusebenza; Adsorption futhi isixazululo. Ukuze uthole igesi umkhiqizo ngokuqhubekayo, imibhede adsorption engaphezu kwemibili ngokuvamile ukufakwa imishini elingenawo umoya-okwenza, futhi ezinye izinyathelo asizayo kudingekile nazo ebekwe ngokombono energy ukusetshenziswa nokuzinza. embhedeni ngamunye adsorption ngokuvamile has udlule kuzinyathelo ezifana adsorption, decompression, nokuhlanza noma decompression kokuzalwa esikhundleni siwasebenzise ngisho ingcindezi umfutho, nemisebenzi okuphindaphindiwe njalo. Ngesikhathi esifanayo, embhedeni adsorption ngasinye ezahlukene ukusebenza izinyathelo. Ngaphansi kokulawula PLC, ukusebenza kwe-imibhede adsorption eziningana kungenziwa esihlelwe futhi uvalo ku izinyathelo ezingokoqobo, ukuze idivayisi ingcindezi jika adsorption kungaba uqhubeke kahle futhi ube ukuthola igesi umkhiqizo ngokuqhubekayo. Ukuze langempela ngokwahlukana inqubo, nezinye izingxenye trace emoyeni Okunye okufanele kucatshangelwe indlela. Umthamo adsorption-carbon dioxide futhi amanzi phezu adsorbent evamile ngokuvamile mkhulu kakhulu kunalelo nitrogen ne-oxygen, ezingasetshenziswa zisuswe ngokugcwalisa embhedeni adsorption nge adsorbent ezifanele (noma i-adsorbent elingenawo umoya-okwenza ngokwayo).
Isibalo kwemibhoshongo adsorption adingekayo amadivayisi ukukhiqizwa-mpilo incike ngezinga zokukhiqiza oksijini, adsorbent ukusebenza inqubo design. Ukuthula ukusebenza wokusebenza multi-umbhoshongo kuqhathaniswa kangcono, kodwa utshalomali imishini kuqhathaniswa eliphezulu. Umkhuba lwamanje ukusebenzisa kahle kakhulu i-oxygen sorbent ukunciphisa isibalo kwemibhoshongo adsorption nokusebenzisa iDemo yokusebenza nezikhathi ukwenza ngcono ukusebenza kahle kwe-unit and ukulondoloza utshalomali ngangokunokwenzeka.
1. imishini Simple inqubo
2. Izinga ukukhiqiza umoya-mpilo ngezansi 10000m3 / h, kanti ukusetshenziswa kwamandla ingaphansi kanye utshalomali lincane;
3. Inani ubunjiniyela incane, futhi inkathi ukufakwa kudivayisi mufushane kunalokho zedivayisi cryogenic;
4. okuphansi ukusebenza imishini nokugcinwa izindleko;
5. Idivayisi has ngezinga eliphezulu of ezishintshayo operation, ekahle futhi okusheshayo ukuvula ngokushesha bese ima, futhi inombolo encane opharetha;
6. Idivayisi ine eqinile operation ukuzinza nokuphepha okusezingeni eliphezulu;
7. Operation Simple, futhi izingxenye eziyinhloko konke kusuka abakhiqizi omhlaba bodumo;
8. okungenisiwe-mpilo sieves yamangqamuzana ne Yizinga eliphakeme futhi ukuphila isikhathi eside;
9. Ukuzivumelanisa nezimo zokusebenza Namandla (umthwalo aphakeme umugqa futhi fast isivinini ukuguqulwa).
usayizi 1. Product: 100-10000nm3 / h
2. Oxygen ubumsulwa: 90-94% noma ngaphezulu, okuyinto kungase kushintshwe ngaphakathi 30-95% ububanzi ngokuvumelana nezimfuneko umsebenzisi.
3. Amandla ukusetshenziswa zokukhiqiza-mpilo: lapho ukuhlanzeka mpilo 90%, ukusetshenziswa kwamandla ibe umoya-mpilo ohlanzekile 0.32-0.37kwh / Nm3
4. Oxygen ingcindezi: hhayi ningi than 20kpa (kungenziwa Umfutho)
5. Amandla: okungaphezulu kophawu noma elilingana 95%
Okulandelayo: ZBN Nitrogen generator
Okuzenzakalelayo Psa akusayithi Oxygen Generator
Ziyoncibilika Oxygen Generator
Oxygen ziyoncibilika Nano Bubble Generator
Ikhaya Oxygen Generator
Oxygen Generator Ukuze uMbhalo
Oxygen Generator Ukuze Fish Farming
Zeolite Yamamolekhula ngesihlungo Oxygen Generator